ကိုယ့်ရဲ့ Facebook Account ကို Secure ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုထားနိုင်လဲ? -
Facebook Hack ခံရတွေ၊ တခြားသူဖွင့်ပေးထားတဲ့ အကောင့်မို့ ပြန်ဝင်မရတာတွေ အစရှိတဲ့ Facebook နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ကိစ္စတွေကို လုံလုံခြုံခြုံ ဖြစ်သွားအောင်လုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးကို ဝေမျှပေးသွားချင်ပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးသွားမယ့် နည်းလမ်းကို သိတဲ့သူတွေရှိသလို မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက် အကျိုးရှိစေချင်လို့ ဖော်ပြလိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲဒီနည်းလမ်းကို ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်…
ပထမဆုံး ပြောပြချင်တာက Two-Factor Authentication လုပ်တဲ့ နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
-Facebook Setting ကိုသွားပါ
-Security and Login ကိုသွားပါ
-Two-Factor Authentication ကိုသွားပြီး Get Start ဆိုတာကိုနှိပ်ပါ
Method ၃ မျိုးရှိတဲ့ထဲက Text Message ဆိုတာကိုရွေးပါ ( ဒီနည်းက အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းမို့ပါ)။
ဖုန်းနံပတ်ထည့်တဲ့ အခါမှာ ကိုယ်သေချာသုံးတဲ့ ဖုန်းနံပတ်ကို ထည့်ပေးပါ (အကောင့်တခုခုဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီဖုန်းနံပတ်နဲ့ ပြန်ယူနိုင်လို့ပါ) အချိန်တိုအတွင်းမှာ သင့်ဖုန်းကို Confirmation Code ၆ လုံးပို့ပေးပါလိမ့်မယ်
-ဒီအချက်တွေပြီးသွားရင်တော့ သင့် Facebook Account ဟာ Two-Factor Authentication အလုပ်လုပ်ပါပြီ
-ဒီနည်းလမ်းကို လုပ်ထားခြင်းဖြင့် သင့် Facebook Account ကိုအခြားသူတွေ ဝင်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် သင့်ဖုန်းကို Alert SMS ပို့ပေးပါတယ်။ တိုက်ရိုက်တန်းမဝင်နိုင်တော့ပါဘူး သင့်ဖုန်းကိုပို့တဲ့ Code ကိုရမှသာ သင့်အကောင့်ထဲကို ဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်မျိုးကတော့ Two-Factor Authentication မှာ Alert တစ်ခုခုဖော်လာပြီဆိုရင် ကိုယ့်အကောင့်က ဘယ် Device တွေမှာ Login ဝင်နေတယ်ဆိုတာကို ကြည့်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
-Security and Login ထဲမှာပဲရှိပြီး အပေါ်ဆုံးမှာရေးထားတဲ့ Where you’re logged in ဆိုတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ See All ကိုရွေးပေးပါ
-ဒီအဆင့်တွေပြီးသွားရင် ကိုယ့်ရဲ့ Facebook Account ဝင်နေတဲ့ Device တွေကိုတွေ့ရပါမယ်။ ကိုယ့်မဟုတ်တဲ့ Device တွေဆိုရင် Log Out Device လုပ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ PC မှာကောဖုန်းမှာကော Account ဝင်ထားရင်တော့ Device ၂ ခုတော့ ဖြစ်နေမှာပါ။
ဒီနည်းလမ်းတွေနဲ့ သင့် Facebook Account ကို Secure ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Posted by Min Thuta/ Tuesday November 26th, 2019/ Blog/0Comment
Effective ဖြစ်တဲ့ Marketing နည်းလမ်းဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ ?
Digital Marketing ဟာဘာကြောင့် အနာဂတ်ရဲ့ Marketing အဖြစ်လွှမ်းမိုးလာရတာလဲ ?